Kaasoo lagu xaqiijinaayo goobaha Metro oo ah kuwo amaan iyo soodhawayn eh | Metro
Waxay umuuqataa siday ahaan jirtayba maalin kasta, waxaan kamaqalnaa fariin kale oo muujinaysa in dawladeena federalku kusocoto wadada takoorka iyo kalaqaybinta bulshada.
Caruur muhaajiriin ah ayaa laga reebtay waalidiintood aagoo doonaaya inay maraan wadada sharciga ah ee codsiga magangalyo doonka dadka kasoo cararay rabshadaha kasocdo wadankooda. Dadka soogalootiga ah waxaa lagasoo afduubayaa wadoonyinka markay shaqooyinkooda usocdaan. Madaxwaynaheena ayaa soosaaray, Maxkamada Sare ay kuraacday, xayiraad kamamnuucaysa dadka muslimiinta ah ee wadamada qaar kayimaada wadankeena soogalaan. Meelaha udhaw guryaheena, waxaan ognahay in saraakiisha socdaalku aad ujoogaan markamadaha, beeraha iyo meelaha bulshadu iskugu timaado oo dadku kukulmaan waxayna taasi abuurtay cabsi iyo walwal soowaajahay dadka soogalootiga ah iyo bulshooyinka qaxootiga ah.
Waxaa suuragal ah inaanaan wax badan kaqaban karin joojinta falalkaas banii'aaaniada kabaxsan, laakiin waxaan awood uleenahay inaan isbadal ka abuurno gobalkiina qiimaha badan ee Portland, waxaan samaynaynaa dadaalkasta sidaan uga guul gaari lahayn taas.
Ka xarunteena Metro ahaan, waxaan kudadaalaynaa sinaan bulshooyinka taasoo ay qayb katahay inaan raacno Qorshe Istaraatiijiyadeed oon Kuhormarinayno Sinaanta Bulshooyinka, Isdhexgalka iyo Wada noolaanshaha bulshada. Hal mabda' oo muhiim u ah dadaalkeena waa in inaan xaqiijino in haayada Metro ay abuurto adeegyo, barnaamijyo, iyo goobo amaan iyo soodhawan uleh bulshooyinka aan cadaanka ahayn, ayna kujiraan qaxootiyaasha soogalootiga ah.
Waxaan balan qaadaynaa in:
Shaqaalaha Metro ayaa kudhaqmaaya sharciga gobalka. Waxaan halkaan ujoognaa inaan ushaqayno dadka kunool gabalkeena, umana shaqayno maamulka socdaalka.
Wax dan ah kama lihin meeshaad katimid iyo sababta aad wadankaan utimid. Waxaan daryeelaynaa adigga. Hadaad boqanayso beeraha Metro, goobaha dabiiciga ah, Beerta Xayawaanada ee Oregon, Xarunta Kulanada ee Oregon, qabuuraha Metro, Xarunta Expo ama XARUMAHA Portland’5 Farshaxanada, waxaad tahay martideena waxaadna kuraaxaysanaysaa barwaaqada gobalkeena. Waxaana xaqiijinaynaa xaquuqda dadka soogalootiga ah iyo qaxootiyaasha anagoon kafiirinayn xaaladooda soogalootinimo waxaana dhawraynaa xaquuqda ay uleeyihiin inay nidaamka saxda ah maraan sida xaqa ay uleyihiin inaysan hadlin haddii laga dalbad inay dukumiintigooda soobixiyaan.
Kuligeen waxaan farxad kahelnaa inaan gobaha dabiiciga ah kunasano, aan waxbadan kabarano ilaalinta xayawaanada duurjoogta ah ama aan kuraaxaysano daawashadoda. Qofkasta wuxuu xaq uleeyahay inuu meel kaligiis kula qaato qofka uu jecelyahay. Qofkasta wuxuu xaq uleeyahay inuu fursad uhelo waqti uu laqaato saaxiibadiis iyo qoyskiisa. Mar danbana waa inuusan jirin ilmo arkaaya waalidiintiis oo lawaydiinaayo "Waraaqaha, fadlan" markay waalidkood lajoogaan beerta raaxada.
Waxaan taageeraynaa isbadal lafahi karo, oo dareenka caadiga ah qaadan karo in lagu sameeyo sharciyada soogalootiga.
Muddo kabadan 130 sano xeerka Statue of Liberty (Xasaanada Xoriyada) ayaa ahaa astaan rajo u ah dadka kunool guumaysiga, saboolka kunool ama khatartu kuqabsato wadamadooda. Lagasoo bilaabo dadkii Irishka ahaa ee gaajada kasoo cararay, ilaa dadkii Talyaaniga ahaa ee takoorka kasoo cararay, ilaa Siiriyaanka iskudayaaya inay raadsadaan meel amaan ah oo ay uga cararaan sunta gaaska ah ee lagu dukhaynaayo dadka shacabka ah, dadka ayaa nasoo aaday inaan nahay goob aqbalaysa codsigooda.
Qaar badan oo kamid ah ayaa caruurtooda sookaxaystay, caruur aan aqoon wadan kale laakiin Maraykanka kaliya yaqaana. Wxay kudhasheen Soviet Union, Mexico, Myanmar iyo Somalia iyo Nicaragua, laakiin hadda waxay joogaan wadankaan. Waxay xaq uyeesheen inay helaan muwaadinimoada asalka ah ee wadankaan ayagoon aadin wadan aysan waxba ka aqoon.
Mana jiro qof, wadankuu rabo haka imaadee, kacabsan kara inuu magangalyo waydiisto dalka Maraykanka. Waxaa naaga doonayaa inaan qaxootiyaasha kusoodhawayno albaabadeena aanaana caruurta kuxirin boholo silig lagu wareejiyay. Waxaan doonayaa nidaam si sax ah oo cadaalad ah uxukuma codsiyada magangalyada ee dadka si xushmad lehna ula dhaqma markay sugayaan go'aaminta xaaladooda magangalyo.
Waxaan siiwadaynaa inaan kuboorino hogaamiyaasheena aqalka wakiilada inay taageeraan ayna ansixiyaan Dream Act (Sharciga Riyada) oo nadiif ah, ayna wax uga badalaan nidaamkeena socdaalka qaab ilaalinaaya Mabaadii'da Wadankeena Maraykanka.
Metro waxay taageertaa sharuucda Oregon.
Sharciyaan waxay sharaxaad siinayaan shaqaalaha dawlada doorka ay kuleeyihiin marka saraakiisha socdaalku yimaadaan goobo aan laga filayn si ufiiriyaan sharciyada dadka. Waxaan aaminsanahay in qofkasta oo kunool gobal waynaha Portland, ayadoon laga fiirin meesha uu kaymid, uu xaq uleeyahay in si xushmad leh loola dhaqmo uuna noloshiisa ugu raaxasto si xor ah, oon cabsi lahayn, tayada nolosha iyo amaanooyinka kuxeeran, oo dad badan o naga mid ah si bilaash ah kuhelaan.
Waxaan rabnaa inaan kycelino – Metro waxay aaminsantahay inay dadka dhan adeegyada usimanyihiin. Waxaan ka kaniyad xumahay waxa wadankeena kasocda. Mabadali karno dalka, laakiin waxaan kudadaalnaa inaan lashaqayno bulshooyinka si aan usamayno waxaan awoodno si aan udifaacno mabaadii'deena Maraykanka, gaar ahaana mabaadii'da sinaanta dadka iyo xushmada aan uhayno bulshooyinkeena aan cadaanka ahayn.